Kaylee, mpanakanto 15 taona manana mari-pahaizana master amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Efa akaiky ny faran'ny herinandro isika ary hamita ny herinandro ny artista izay vao 15 taona monja ary izay mampiseho teknika fanaovana sary tena mahavariana araka ny hitanao tamin'ny sary lohateny an'io vazy fitaratra toa nipoitra avy tamin'ny takelaka io. Fahitana zavatra tsara hanaraka azy avy amin'ny Instagram izay azonao jerena etsy ambany.
Nanomboka aho fampidirana samihafa de mpanakanto isan-karazany Izany amin'ny mampiseho ny lanjan'izy ireo miaraka amin'ny pensilihazo amin'ny saripika na izay mahaliana antsika ankehitriny amin'ireto andalana ireto miaraka amin'i Kaylee amin'ny maha-mpitolona sy izany vera nahagaga tamim-pamirapiratana izany Mampiseho izay azo atao amin'ny fahaizana, zavakanto kely ary hafanam-po. Tsy ny Photoshop no zava-drehetra amin'izao andro dizitaly feno entana izao.
Un fitaratra nianjera izay mety hitovy endrika tena izy misy pensilihazo roa eo akaikiny ary mandra-pandinihanao akaiky ny tenanao hanakaikezana ny antsipiriany dia tsapanao fa tena sary izany. Tsy ianao no ho voafitaka voalohany ary hilaza amin'ny tenanao an'arivony fa vera ity alohan'ny hahatsapanao izay tena izy.
Eo no mipoitra ny fifehezana ho an'ny mpanakanto antsoina hoe Kaylee izay tsy mihoatra ny 15 taona, manomboka anio dia afaka manaraka azy ianao ao amin'ny Instagram, izay feno sary mahafinaritra hafa, noho izany dia hitanay niara-nahita indray ny genius androany tamin'ny ampahan'ny tananao.
ihany koa Manome sary 2 an'ny fizotry ny famoronana vera aho hahafahanao mianatra kely momba ireo dingana vita. Tena manan-talenta izy, saingy azo antoka fa nahatratra izany izy noho ny asa maro teo aloha, zavatra ilaina hitadiavana izay azony atao ho an'ny tenany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fitaratra kristaly niavaka nitarihan'i Kaylee
Luis Eduardo Dugarte Salas dia hoy izy:
Mahafinaritra, talenta inona izany. Olona tena manokana. Krismasy sambatra ary fahombiazana 2018 ho an'io olona tsy ampoizina amin'ny majika io.
Valiny tamin'i Luis Eduardo Dugarte Salas